Ogaden News Agency (ONA) – Bayaan faahfaahinaya kulankii dhex-maray guddoomiyaha JWXO iyo madaxwaynaha Soomaaliya.
Bayaan faahfaahinaya kulankii dhex-maray guddoomiyaha JWXO iyo madaxwaynaha Soomaaliya.
Posted by Dayr	/ August 1, 2018
Markii ay taariikhdu ahayd 28/07/2018, waxaa magaalada Casmara ee waddanka Eritrea ku kulmay Guddoomiyaha Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) Admiral Mohamed Omar Osmaan iyo madaxwaynaha dowlada fedaraalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, oo booqasho rasmi ah ku joogay waddanka Eritrea.
Kulanku wuxuu dhacay, ka dib markii madaxwaynaha Soomaaliya uu codsaday inuu la kulmo guddoomiyaha JWXO, si ay uga wadahadlaan dhibaatooyinkii ka dhashay falkii sharci darrada ahaa ee dowlada Soomaaliya ay gumaysiga Itoobiya ugu gacan gelisay halgame C/kariim Sh Muuse (Qalbi-dhagax) iyo go’aankii uu Golaha Wasiirradu soo saaray ee ahaa in JWXO ay tahay urur argagixiso ah.
Wadahadal qodo-dheer oo labada masuul dhex-maray ka dib, wuxuu madaxwaynaha Soomaaliya ka garaabay falkii sharci darrada ahaa ee dowlada Soomaaliya ay kula kacday halgame C/kariim Sh Muuse, wuxuuna sheegay in falkaasi ahaa mid si khalad ah ku dhacay.
Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) waxay soo dhawaynaysaa kulanka dhex-maray labada dhinac iyo natiijooyinka ka soo baxay, waxayna rumaysan tahay in kulankaasi uu dhabbaha u xaadhi karo in la wanaajiyo xidhiidhka u dhexeeya JWXO iyo dowlada fedaraalka ah ee Soomaaliya.
Si loo dhammaystiro wixii ka soo baxay kulankaas, waxay JWXO ka sugaysaa dowlada fedaraalka ah ee Soomaaliya inay qaaddo tallaabooyinka soo socda; Inay buriso go’aankii Golaha Wasiirrada ee dowlada fedaraalka Soomaaliya ka soo baxay 06 September 2017 ee ahaa in JWXO ay tahay urur argagixiso ah.
Iyo inay cudurdaar rasmi ah ka bixiso falkii sharci darrada ahaa, oo dhaawac wayn u gaystay halgame C/kariim Sh Muuse iyo dadwaynaha Soomaaliyeed oo dhan, meel kastoo ay joogaan.
Midnimo, Mintid, Isku-tashi iyo Guul
Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO)